Tofu iyo kalluunjableyda oo leh bariis | Bezzia
Tofu iyo cauliflower curry leh bariis
Maria vazquez | 06/04/2021 10:00 | Saladyada iyo khudradda
Bezzia maalin kasta oo dhaafta waxaan jecel nahay curry badan, ma isla waxbaa kugu dhacaya adiga? Digaagga iyo hilibka baradhada macaan in aan idinla wadaagnay ilaa seddex sano ka hor waa mid ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay waana ku tashanay si aan tan u abuurno nooca vegan: tofu iyo curry cauliflower.
Digaagga waxaa lagu beddelay noocyadan tofu iyo khudradda kale marka lagu daro baradhada macaan ee lagu daray cuntada. Cuntadani curry ma leh cid hadheysa. Markan kuma soo darin yaanyo ama wax kale oo wax ka beddelaya midabkiisa ama dhadhankiisa.
Maanta waa saxan adag oo dhameystiran, kaamil ah in loogu adeego sidii saxan keliya. Diyaar garowgeedu waa mid fudud oo kuma qaadan doono wax ka badan 40 daqiiqo. Taladaydu waxay tahay inaad ka faa'iideysato oo aad ku filnaato laba maalmood. Marka bariis waad ku cuni kartaa maalinti xigtana u casho oo isku mid ayey kugu kici doontaa. Miyaad ku dhiirrataa inaad isku daydo?
1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay 3
Waxyaabaha ay ka kooban tahay 3
Saamaynta 2 ee saliid saytuun ah oo dheeri ah
400 g. tofu, la jarjaray
1 basal la jarjarey
1/4 basbaas gambaleel cas, jar jartey
1/2 aan tayo lahayn, ubaxyo
1 baradho macaan, la jarjaray
350 ml. caano qumbaha
2 qaado oo budada curry ah
1 qaado oo ah paprika macaan
1/3 qaado oo shaah ku jirta dhulka
1 qaado oo budada galley ah ayaa ku milmay 1/2 koob oo biyo ah
1 koob oo bariis la kariyey ah
Diyaarso dhammaan maaddooyinka.
Ku kululee labada qaado ee saliidda digsi iyo toosi tofu xilliyeedka 8 daqiiqo ama ilaa khafiif ah bunni. Markaad dhamayso, ka saar digsiga oo keydso.
Isla saliida Hada basal iyo basbaas shiil inta lagu jiro 5 daqiiqo.
Kadib Ku walaaq ubaxa iyo baradhada macaan, dabool weelka oo ha u kariyaan kuleylka dhexdhexaadka ah 8-10 daqiiqo.
10 daqiiqo kadib ku dar caanaha qumbaha, dhir udgoon, galley iyo isku dar. Isku kari 5 ilaa 10 daqiiqo ama ilaa baradhada macaan jilicsan.
Ku darso hilibka tofu iyo kaabashka leh bariis karsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Saladyada iyo khudradda » Tofu iyo cauliflower curry leh bariis
Qaxwaha gacmeed qurux badan oo wax ku ool ah oo sameeya qaxwada
Caadooyinka xun ee soo afjari kara lamaanaha